ရည်းစားများ 'Ultimate Sex Hack: Karezza (၂၀၁၃) - မင်းရဲ့ Brain On Porn
ရည်းစားများ '' Ultimate Sex Hack: Karezza (2013)
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကာရာဇာဟုခေါ်သည့်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ကြားအတိုချုံးစကားပြောဆိုခဲ့သည် (အသံထွက်ခဲ့သည်) ka-RET-za) ။ ABC ရုပ်သံတစ်ဦးသို့ပွေးလေ၏ သတင်းပုံပြင် နှင့် karezza ဆောင်းပါးများကိုအိန္ဒိယမှအာဂျင်တီးနားမှချီပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါကြည့်ရန်များ၏မင်းသမီးပင်က grappled ။ တစ်ဦးက karezza subreddit ရေနွေးငွေ့ရရှိခဲ့နှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံသစ်တစ်ခုမွေးဖွား karezza က်ဘ်ဆိုက်.
သို့တိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများမှာမင်းတို့ karezza ဆိုတာကိုသဲလွန်စမပေးနိုင်လို့ပဲ။ ငါမရှင်းပြခင်ဒီမှာအခြေအနေအနည်းငယ်ရှိတယ်။ လူ့မိတ်လိုက်ခြင်းသည်ဒစ္စနေး၏ထူးခြားချက်အချို့ရှိသည်။ မှန်ကန်တဲ့အသစ်ချစ်သူတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပျားရည်ဆမ်းနိုင်တဲ့ neurochemicals ကို ၀ တ်ဆင်ထားကြတာပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ကအပိုရှိသည် တွင် nerve growth factor နှင့် cortisol သူတို့ရဲ့သွေးပြန်ကြောမှတဆင့်စီးဆင်း။ Dopamine-releasing ဦးနှောက်ဒေသများ activated နေကြသည်။ သူတို့၏ serotonin မကြာခဏ OCD လူနာ-ရာချစ်သူများတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျော် obsessive အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၏အဆင့်ဆင့်အတိုင်းအနိမ့်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထူးဆန်းသောအရာတို့ကို၎င်းတို့၏နှင့်အတူသွားကြသည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ဖြေ အနိမ့် အစောပိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းစဉ်အတွင်းအမျိုးသားများတွင်သာမန်ထက်နှင့် ပိုမိုမြင့်မား အမြိုးသမီးမြား-ဆောင်ခဲ့ထပ်တူပြုခြင်းသို့ပိုပြီးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်အတွက်ပုံမှန်ထက်။
သို့သျောလညျးအပေါငျးတို့သညျဤအစွမ်းထက် neurochemicals နောက်ဆုံးပေါ်မှာတစ်နှစ်နှစ်ခု၏အဆုံးအားဖြင့်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ပြန်သွားပါ။ ကြောင်းအာနိသင်တိုးမြှင့်ရိုက်ချက်ချွတ်ကျီပြီးတာနဲ့ ဒါကိုတော့ပေါ်လာလေ့။ ထိုစုံတွဲများသည်စုံတွဲများသည်ယင်းကိုတန်ပြန်ရန်မသင်ယူလျှင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည်။ ကျူးလွန်သောစုံတွဲများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ် - အိပ်ခန်းများကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုနှင့်အတူအစောပိုင်းပြင်းထန်မှုကိုပြန်လည်အပူပေးသော - မကြာခဏနောက်ကျခြင်း။ "အပူ" တဖြည်းဖြည်းနိုင်ပါတယ် အပျော်အပါးကိုအမြစ်တွယ်နေသောချစ်သူများ ပင်လျော့နည်းပြည့်စုံရာ vanilla အပျော်အပါးအောင်။ အိမ်ထောင်ဖက်လျော့နည်းခြုံငုံအပျော်အပါးခံစားနေချိန်မှာအသစ်ကစံချိန်တင်မြင့်တက်ရှာကြံ၏, ချည်း, ဒါပေမယ့်အလွန်တောင်းဆိုမှုများပြေးစက်ပေါ်တွင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
Karezza သည်ကျွန်ုပ်တို့တွဲဖက်ထားသောစက်ယန္တရားကိုဟက်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆွဲဆောင်ရန်အော်ဂဲနစ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အထွတ်အထိပ်ရည်မှန်းချက်မရှိဘဲချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်စုံတွဲများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်“ နှောင်ကြိုးပြုခြင်း” တွင်ပါ ၀ င်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပူးတွဲမှုတွေကိုအလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မှပြသခဲ့ကြသည် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ လည်းပဲ ငွေချေးစာချုပ်များကိုခိုင်ခံ့စေ.
ဒီ post မှာတော့လူတွေကဒီအကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့အလေ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမေးလေ့ရှိတဲ့သဘာဝမေးခွန်းတွေကိုငါပြောပြမယ်။ ပထမ ဦး စွာ:
သင်ဘယ်လို karezza အကြောင်းကိုမဆိုဆွေးနွေးမှုအတူလိုက်ပါသော guffaws တုံ့ပြန်သလဲ?
ငါတရုတ်ကိုဖတ်ရသောအခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါအလားတူကနဦးတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ငါယေဘုယျအားဖြင့်, တလျှောက်ရယ် Daoist လက်စွဲစာအုပ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ပွုစုပြိုးထောထက်အော်ဂဇင်အတွက်ဖြန့်ချိအကြောင်းကို။ အယူအဆအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်, စာအုပ်5နှစ်ပေါင်းများအတွက်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းပေါ်ပြန်လေ၏! နောက်ဆုံးတော့သို့သော်ကျွန်မအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ခဲ့ပြီးအံ့သြလေ၏။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မစမ်းသပ် lovemaking ပြောင်းလဲခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါဟာအချို့အတွက်ဖော်ပြချက်ပိုမိုနီးကပ်စွာကှာခဲ့ အဟောင်းကို karezza စာအုပ်များ နှင့်ဝေးလေလေစွမ်းဆောင်ရည်-မောင်းနှင် Daoist lore မှ။ နက်နဲသောအရာ, သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့် karezza အတူတူသွားကြဖို့သလိုပဲ။
karezza နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်လူသားမြားသညျအကြှနျုပျတို့ပြီးသားလိင်အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောအရာအားလုံးကိုသိကျွမ်းထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့တွေအများကြီးရှိသည် ဦးနှောက်ထဲမှာမသိမသာ, ရစ်အပြောင်းအလဲများ သော neurochemical အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အော်ဂဇင်နှင့် ပို. ပင်များ၏ပြင်းထန်သော neurochemical အဖြစ်အပျက်အတိုင်းလိုက်နာ အလွန်အကျွံအော်ဂဇင်၏ဆိုးကျိုးများ (ထိုအသီးအသီးတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကိုဆိုလိုသမျှ) ။
ဤ ဦး နှောက်ဖြစ်ရပ်များသည်လေ့လာမှုသိပ်မရှိသော်လည်း၊ ကန့်သတ်သုတေသန ဒါတွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသိမ်မွေ့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရပါတယ် နှစ်သက်ရဲ့ Post- ထှတျအထိပျအမြင် တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏အဖြစ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှု။ သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုမျိုးဘုံအသိပညာဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ, karezza ၏ပညာထင်ရှားဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုအဘို့, လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်ယင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာစကားစပ်တစ်နည်းနည်း။ ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ကျနော်တို့ကြောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ လိင် = အော်ဂဇင်ဒါပေမယ့်များစွာသောမျောက်ဝံများအတွက်မူ၎င်းသည်မမှန်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောဝံနှင့်မျောက်များ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ copulate.
လူသားများ၌ပင်ကာရာဇာအယူအဆသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်အကြိမ်ကြိမ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအမျိုးမျိုးသောအမည်များဖြစ်သည့် Taoist Dual Cultivation၊ Cortezia, Amplexus Reservatus, Tantra, Polynesian lovemaking ဟုတ်ပါတယ်, ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခါတစ်ရံကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kosher လိင် or လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်မညီကြောင်း ကလေးတစ်ဦးလမ်းလျှောက်နေသည်တိုင်အောင်ဇနီးပြီးနောက်မွေးဖွားပေးသည်။
အဓိကအချက်မှာချာ့ချ်နှင့်ဒီနေ့ခေတ်လိင်မှုကိစ္စများကကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်လက်ခံလာစေရန်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာလျော့နည်းစေသည့်နည်းလမ်းသည်သဘာဝမကျပါ။ သိပ်မရင်းနှီးဘူး ချစ်သူများအနေဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒပြည့်ဝြခင်းသည်စည်သွတ် ravioli ကဲ့သို့အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အထိ ပို၍ သဘာဝကျကျဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်စင်စစ်ငါ (နှင့်ငါလက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ဖူးသောအမျိုးသမီးအားလုံး) ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဒီနေ့၏အော်ဂဇင်ဗဟိုပြုအကြံဥာဏ်သည်လူသားစုံတွဲနှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းက“ အော်ဂဇင်စ်ကိုချစ်မြတ်နိုးမယ်ဆိုရင်ဂျွန်တိုင်းဟာသူ့နောက်ကလိုက်လာသူကိုချစ်ကြလိမ့်မယ်” အော်ဂဇင်တစ်မျိုးတည်းသာဤမျှအကျိုးရှိပါကညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပျော်ရွှင်ဆုံး၊
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အော်ဂဇင်စ် / fertilization အတွက်သာမဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် pair တစုံ bonders ၌တည်၏ လူသားမြားသညျ နှင့် tamarin မျောက်၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရင်းနှီးမှု၏အခြားသိမ်မွေ့သောစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုထိပုတ်ခြင်းအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ Climax သည်ထိုအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်မရှိမဖြစ်မဟုတ်ရုံသာမကတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဘာဝအပြီးအလွန်မြင့်မားသောအမြင်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ (PMS ကိုစဉ်းစားပါ။ )
It ပုံရသည် karezza ကဲ့သို့သောစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အံ့သြစရာတော့မရှိပါ - ချစ်သူများသည် (၁) သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပြီးဘာကြောင့်၊ (၂) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှေးကွေးစွာချဉ်း ကပ်၍ (၃) နူးညံ့သိမ်မွေ့သော 'လှိုင်းများ' တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရာဝတ္ထုများပူလာသောအခါသူတို့၏နှိုးဆွမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲကျစေပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအစွဲနှင့်တူသောအခြေအနေပင်အဆုံးသတ်သည်။
Karezza ကျိန်းသေသို့သော်ဖို့အသုံးပြုတဲ့တစ်နည်းနည်းကြာပါတယ်။ သင်လိင်အင်္ဂါပိတ်ဆို့မှုကိုချင်မဟုတ်လျှင်အော်ဂဇင်-ပြန်၏အစွန်းကနေဆက်နေရန်သင်ယူဖို့ရှိသည်။ (သင်ကဒီမာလမ်းကိုသင်ယူခဲ့လျှင်ရေအေးနာကျင်မှုလျော့ပါးသင့်ပါတယ်။ )
အဘယျသို့အကြိုးခံစားခှငျ့စုံတွဲများ karezza ထဲကရနိုင်မလဲ?
ချစ်သူများတသမတ်တည်း karezza လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသကဲ့သို့, သူတို့ပျော်မွေ့ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, orgasm ပြင်းထန်မှုပျက်ကွက် (သို့မဟုတ်ရှားပါး) ဖြစ်ပါသည်သော်လည်း, (ထိုအိပ်ခန်းအတွင်း, ပြင်ပမှာနှစ်ဦးစလုံး) တစ်ခုလုံးအပျြောအပါးကိုမကြာခဏ သာ. ကြီးမြတ်သည်။ နေ့စဉ် Bond အပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုသဟဇာတနှင့် flirtier လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ karezza ဦးနှောက် (ကျွန်ုပ်တို့၏စားချင်, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မတရားသောအုပ်ချုပ်သောစိတျအပိုငျး) ၏ဆုလာဘ် circuitry အတွက်ကျန်းမာချိန်ခွင်လျှာကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးသည်ဆိုသောကြောင့်, ကဆက်ဆံရေးကိုလျော့နည်းမတည်ငြိမ်သောထို့ကြောင့်ပိုပြီးရေရှည်တည်တံ့စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းသောမောင်းနှင်အားသည်လိင် erectile disfunction နှင့်အတူအမျိုးသားများအတွက်စိုက်ထူခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။ ၎င်းသည်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုပင်သက်သာစေနိုင်သည် "ပျော့ entry ကို" technique ကို.
လူကဲ့သို့စာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူ karezza ဖော်ပြရန် , နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ကျေနပ်စရာနိုင်ပါတယ် ထိုနောက်မှပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိဘဲမကြာခဏမေတ္တာတော်ကိုဖြစ်စေလျက်, ပိုပြီး virile ခံစားရတယ်, သူမ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ကြိုဆိုခံစားရ. သူတို့သည်မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို၊ သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုပိုမိုစွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း၊ စွဲလမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်နှင့်ယခင်ကထက်လိင်ဆက်ဆံရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းတင်ပြကြသည်။ တစ်ယောက်က“ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်တကယ်ချစ်မိသွားပြီ။ ငါတို့ဟာဆယ်ကျော်သက်တွေလိုပဲ ... အရင်ကမကြားဖူးခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံယူနိုင်ပြီ " အမျိုးသားများ၏မှတ်ချက်များ.
အမြိုးသမီးမြားကဲ့သို့အမှုအရာတို့ကိုပြောပါ လာပါ, လွယ်ကူသော, စင်ကြယ်သောရောငျ့ရဲ, နှလုံး-burstingly မတ်ေတာပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုသဟဇာတ and Play ကြီးထွားကသတင်းပို့သည်။ အချို့ကအစီရင်ခံစာလျော့နည်းရာသီနာကျင်မှုနဲ့ခံစားမှုနှင့်အငယ်ရှာဖွေနေ။ အမျိုးသမီးများ၏မှတ်ချက်များ။ ဝိရောဓိအရအမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ပို၍ အနားယူနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်အော်ဂဇင်ပိုမိုဖြစ်လာကြောင်းမကြာခဏဆိုကြပါသည်။ (ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးခြင်းမရှိခြင်းသည်ယောနိသည်နာကျင်စွာထိုးခြင်းကြောင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုကာကွယ်ရန်တင်းမာမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ )
အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏သိသာသောတိုးတက်မှုတစ်ခု၏သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအနေဖြင့်အောက်ဆီတိုတိုစင် (the cuddle chemical) ထုတ်လွှတ်မှုကိုရေရှည်တည်တံ့စေခြင်းသို့မဟုတ် ဦး နှောက်၏အာရုံခံနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသောသက်သာစေနိုင်သည့်နေ့စဉ်ချစ်ခင်မှုအပေါ်ပိုမိုအလေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ Oxytocin သည်လိင်တံနှင့်လိင်စိတ်တုန့်ပြန်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါဟာချစ်ခင်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်းတစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ချိသည်။ oxytocin လည်းအခန်းကဏ္ဍ အော်ဂဇင်လိင်၌ - ကာရီဇာသည်အထွတ်အထိပ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် oxytocin အဆင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် oxytocin ကိုလျင်မြန်စွာကျဆင်းစေသည်။
Karezza သည်အတူတကွနေထိုင်သောစုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစောပိုင်းကဆွေးနွေးခဲ့သည့်အပို - ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသစ်ဖြစ်သောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများမပါ ၀ င်သည့်တိုင်ရင်ခုန်စိတ်ခံစားချက်များကိုစီးဆင်းစေသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်များသည်သူတို့သတိမထားမိသည့်အရာတစ်ခုကိုမကြာခဏပေးတတ်သည် - ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏အထူးဖိတ်ကြားချက်ဖြင့်လိုချင်သော၊ လက်ခံခံရခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Karezza လည်းများအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် porn စွဲမှပြန်လည်ထူထောင်သောစုံတွဲများ။ ဒီဟာကဘာလဲ လူကိုပြောတာပေါ့:
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ၀ န်းကျင်တွင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့မှာငါက ၃၂ ရက်အကန့်အသတ်မဲ့ / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ ငါ့မှာရှည်လျားတဲ့ရပ်တည်မှုလေးပါ။ သူမသည် P / M နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏သဘောထားကိုသိသည်။ သို့သော်သူက“ ကောင်လေး” ဟုသူမထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သုခချမ်းသာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်ဤစီးဆင်းမှုကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူမပြောပြသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူမကသူမအားကျွန်ုပ်အားတွေ့မြင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါ့ဥာဏ်သဘောကနေ, မကြာခဏ orgasm ဟာ reboot ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုတက်ယူရန်ဆုံးဖြတ် / r / karezza အဖြစ်ကောင်းစွာ, ငါ့ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်ကိုပြန်မရနဲ့ကူညီသွားမှာပါ။ ထိုသို့အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကာလ၌ဘယ်တော့မှမတိုင်မီရှိသည်ကဲ့သို့ကျနော်တို့ကပ်လျက်တည်ရှိပါပွီ။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုတဖန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးတည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမေတ္တာရှင်ဆယ်ကျော်သက်၏စုံတွဲတစ်တွဲများမှာနီးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဤရွေ့ကား, မြေတပြင်လုံးလအတွင်းမှာအဘယ်သူမျှမတိုက်ပွဲတွေလည်းရှိကြပြီ အချို့သဘောမတူပေါ်လာ (ဤတဦးတည်းလက်ပေါ်တွင်လက်ချောင်းထက်လျော့နည်းပါပြီ) တစ်ဦးချင်းစီအချိန်ကိုတဦးတည်းပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ပဋိပက္ခထားလိမ့်မယ်။ ရလဒ်: အဘယ်သူမျှမတိုက်ပွဲများပိုမိုစျြခွငျးမတ်ေတာ။
အသစ်သောလူနေမှုပုံစံစတဲ့၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများအတွက် - ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ နိုးနိုးကြားကြားရှိသည်။ ငါအရင်ကထက်အများကြီးလျော့နည်းအိပ်စက်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ရက်အနည်းငယ်အထိကျွန်တော်ဟာလေးနာရီကျော်ကျော်လောက်အိပ်လို့မရဘူး၊ မနိုးတော့ဘူး။ ဒါကပြီးသွားပြီ၊ အခုငါခြောက်နာရီကနေခုနစ်နာရီအထိအိပ်စက်ရတယ်၊ ငါမအိပ်တဲ့အခါအိပ်ရာကျယ်နေတုန်းပဲ။ လွန်ခဲ့သောတစ်လကမိမိနှင့်မတူဘဲနေ့လည်ခင်းများ (နှင့်အခြားပျင်းစရာအချိန်များ) တွင်အိပ်မောကျမည်ကိုခံစားရသည်။ ဒီဟာကိုဆက်သွားဖို့ငါရည်ရွယ်ထားတယ်၊
အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ karezza သည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသော၊ ထို့ကြောင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး အားရှင်းပြရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သောအဓိကအကြံပြုချက်အများစု၏ရေဒါဖြစ်သည်။ karezza ကိုကျင့်သုံးသောစုံတွဲများသည်အော်ဂဇင်ကြောင့်ဖြစ်သောလိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုမိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်သုတေသနကြောင်းထုတ်ဖော်နေသည် လိင်ဆက်ဆံမှုအထူးသဖြင့်အကျိုးရှိ (အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက) ။
အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သောဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်ပျားရည်ဆမ်း neurochemicals များကြောင့် Karezza သည်ချစ်သူအသစ်များအတွက် ပို၍ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးချိတ်ဆက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်အဆင်မပြေပါ။ ဝေးလံခေါင်သီချစ်သူများအတွက်လည်းပြproblemနာဖြစ်သည်။ သူတို့မှာနေ့စဉ်နှောင်ကြိုးအပြုအမူလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ခွဲနေပြီးနောက်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်ပါတယ်။
ပညာတတ်ပါ။ သင်အဘယ်ကြောင့်သင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနားလည်မှုမရှိပါက karezza နှင့်မည်သည့်တိုးတက်မှုကိုမျှလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ နှစ်ခုလုံး လုပ်ချင်တယ် ၎င်းသည်တစ်လုံးတည်းမဟုတ်ပါ၊ မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်အမှန်တကယ်ကြိုးစားရန်လိုသည်၊ ၎င်းအကြောင်းနှစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပြီးမှုတ်သွင်းခြင်းမခံရပါကယင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်အပြင် Cupid ၏အဆိပ်မြှား - အကျင့်မှသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှသဟဇာတဖြစ်သည်, အချို့သောဖှယျအဟောင်းရှိပါတယ် အခမဲ့ karezza စာအုပ်များ ရရှိနိုင်အွန်လိုင်း။
အနည်းဆုံးသုံးပတ်ကြာတသမတ်တည်းရှိစေသတည်း။ Postcoital neurochemical ဂယက်ထနိုင်အောင်အယူအဆချစ်သူများတစ်ဦးအနေဖြင့်ထိုသို့အတူနေဖို့ရှိသည် karezza အတွက်စစ်မှန်တဲ့အလားအလာတွေ့မြင်ရန်, နေရစ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း orgasm လိင်နှင့်အတူကရောထွေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
တဖြည်းဖြည်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမပါ ၀ င်သည့်အပျော်အယင်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်စတင်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြိုက်ချင်းမတူတဲ့ထိတွေ့မှုကိုအလှည့်ကျယူပါ။ Cupid ရဲ့အဆိပ်သင့် Arrow ဤနေရာတွင်နေကြသည်ကျောတစ် 3-တပတ်အစီအစဉ်ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် 31 ကစား Non-လိင်ဆက်ဆံမှုလှုပ်ရှားမှုများ လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်။ Cupid လည်းဟာသကိုလူစုထဲကပုံပြင်များနှင့်မိတ်လိုက်နှင့် Bond အကြောင်းကိုသမိုင်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းရောနှောဖို့လိင်ဆက်ဆံမှုထည့်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ karezza စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း lovemaking အချိန်စာရင်းကောင်းရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများအတွက်အခါသမယမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ယောက်ျားသည်“ Next Sex” (karezza နှင့်တူညီသည်) ကိုရှင်းပြသည့် YOUTube ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။